Nchekwa ike na imegharị | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Nchekwa ike na imegharị ihe
Adrian | | Nchekwa ike, Ike imeghari ohuru
Na mba niile imeghari ọ bụghị naanị iji belata ihe mkpofu kamakwa na-enyere aka belata nke anwuru nke carbon dioxide, mmanụ, ọkụ eletrik na mmiri.
Nweghachi nke ụdị ihe ọ bụla site na akwụkwọ, iko, plastik, ọla, wdg. ma ojiji nke ume ohuru ga - ekwe ka nke ka mma ike ịrụ ọrụ na mbelata nke mmetọ.
The imegharị ihe maka iji nke ngwaọrụ-enye ohere ịrịba ego na ulo oru ebe ebe ọtụtụ n'ime ike na ọ na-eri bụ ịmịpụta ma mepụta akụrụngwa iji mechaa kọwaa ngwaahịa ndị a.
Otu ihe atụ iji nwee ike ịghọta oke nchekwa ego nke mmadụ nwere mgbe emegharịrị ya bụ na ọ bụrụ na ejiri aluminom mee ihe, naanị 5% nke ihe a ga-eri ma ọ bụrụ na ọ na-amịpụta site na m na-emefu, yabụ enwere 95% nchekwa nke ike yana obere ikuku.
Ọ dị oke mkpa na mpaghara niile nke ọha mmadụ na-etinye aka na ịchekwa ike ma chọọ arụmọrụ na iji ike. Karịsịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe ọ bụ na ha bụ ndị na-eji ike kachasị ike ma na-ewepụta mmetọ kachasị.
Mwube nke osisi imegharị ihe eji eme ihe nwere ike iji ume ọhụrụ na-arụ ọrụ ọfụma ọ bụla yana gburugburu ebe obibi. Enwere teknụzụ dị mma iji chekwaa ume na usoro imegharị, yabụ oke ojiji ga-ekwe ka mmụba gburugburu ebe obibi dị mkpa. Nakwa ụgwọ ebe ọ dị ọnụ ala karịa recycled akụrụngwa karịa ndị enwetara site na isi mmalite.
Kwalite ụlọ ọrụ na-emegharị ihe bụ ụzọ isi rụkọta ọrụ na nlekọta gburugburu ebe obibi na ịlụ ọgụ megide mgbanwe ihu igwe.
Mana ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ dị iche iche ga - egweri, mana maka ụmụ amaala niile isonye na ọrụ a ka e wee nwee ike iji ihe niile atụfuru atụfu ma nwee ike iweghachi ha na usoro mmepụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Nchekwa ike na imegharị ihe
Egweri anyanwụ modul ma ọ bụ ogwe
Ike anyanwụ n’ọrụ ugbo